ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gene အတွက်မျိုးဗီဇသင်္အချိန်ကျော်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်
အီဗိုလူးရှင်း၏အခြေခံနှင့်အဓိပ္ပါယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသက်ရှိများ၏လူဦးရေ၏မျိုးဗီဇရေကူးကန်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနေဆဲမျိုးရိုးဗီဇ code တွေရဲ့အလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အများကြီးရှိသည်, ဒါပေမယ့်သိပ္ပံသက်ရှိအကျင့်ကိုကျင့်၏ပုံမျိုးဗီဇပစ္စည်းအကြောင်းကိုအသိပညာ၏ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်ဆောကျခဲ့သညျ။ ဘယ်လို DNA ကိုအပြောင်းအလဲများကိုကျွန်တော်တို့သည် DNA ကိုယေဘုယျနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှအညီအမျှအရေးကြီးသောအတွက်ဘာတစ်ခုတော်တော်လေးကောင်းသောဥာဏ်ရှိသည်။
အီဗိုလူးရှင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲ DNA ကိုလုပ်ဆောင်နေပေမယ့် DNA ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မပေးပါ။ DNA ကိုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲ၏အဓိကယန္တရားဖြစ်ပါတယ် mutation ။ ဒါက DNA ကို mutation မှဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်တစ်ဦးအချက်ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် mutation ၏ယန္တရားများစွာကိုတစ်ခုသက်ရှိအတွက်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေအပါအဝင်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ဒါကကျနော်တို့အနေနဲ့သက်ရှိပြောင်းလဲမှုများထိခိုက်နိုင်သည့်အားဖြင့်ယန္တယားအချို့ကိုနားလည်ဆိုလိုသည်။
အားလုံးသက်ရှိသူတို့ပြောင်းလဲမှုကဤယန္တရားများမှဘာသာရပ်ကြောင်းကိုဗီဇပစ္စည်းအပိုင်ကြောင့်ဘုံခုနှစ်ရှိသည်။ ပိုပြီးင်ဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အနေနဲ့သက်ရှိပိုင်ဆိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများက၎င်း၏ကဆုံးဖြတ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည် မျိုးရိုးဗီဇကုဒ် - ၎င်း၏ဗီဇကအဘယ်အရာကိုတစ်ခုသက်ရှိစေသည်အကြီးအကျယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ 1) DNA ကိုတစ်ခုသက်ရှိ၏သဘောသဘာဝဆုံးဖြတ်သည်နှင့် DNA ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည့်မှတဆင့်ယန္တရားများ 2) ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုဤရွေ့ကားအချက်အလက်များ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အခြေခံဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်ဤဖြစ်ရပ်မှန်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
အသေးစားအပြောင်းအလဲများ & အကြီးစားအပြောင်းအလဲများ
အခုတော့ DNA ကိုထိုသို့နဲ့ DNA ကြောင့်, ထိုမျိုးဗီဇကုဒ်အတွက်အကြီးစားပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်ကျော်ရာအရပ်ကိုယူနိုငျကွောငျးအဆက်ဆက်အမျိုးအနွယ်မှအောင်မြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆက်ဆက်အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဘာသက်ရှိစေသည်ပေးတော်မူ၏။ အချို့သောယန္တရားဖြစ်ပျက်ခြင်းမှစသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားစုဆောင်းခြင်းတားဆီးမယ်လို့ထားတဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါလျှင်ဒီသဘောမျိုးလုပ်မဟုတ်ဘူးတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးဘဝကိုပုံစံကိုပြောင်းလဲခံရဖို့ကဒီ code ကိုတစ်ယန္တရား, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရာအရပျယူနိုငျသောအပြောင်းအလဲများနှင့်အပြောင်းအလဲများရာအရပ်ကိုယူဘို့အချိန်အများကြီးပမာဏကိုကန့်သတ်မရှိလူသိများယန္တရား၏ဝိသေသလက္ခဏာများကုဒ်သွင်းများအတွက်ယန္တရားရှိသည်။ အီဗိုလူးရှင်း၏အလွန်အခြေခံ, မျိုးရိုးဗီဇ, ဘုံနွယ်ဖွားနှစ်ဦးစလုံးဇီဝနှင့်ယုတ္တိနည်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှသောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။
အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှု၏သော့ချက်ဧရိယာ creationists မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. နှင့်ဆင့်ကဲဝါဒီ creationists မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုအချို့အချက်ထက်ကျော်လွန်မသွားနိုင်ဆိုကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အများအားဖြင့်, ဒီအနေအထားအဘို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မျှထောက်ခံမှုလည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးအမှုဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေတစ်ခုသက်ရှိမှထိခိုက်ဖြစ်ကြပြီးသိပ်ပြောင်းလဲမှုအချိန်ကျော်ရာအရပျကိုယူလျှင်, သက်ရှိအလားအလာဖြစ်မဟုတ်ဘူးကြောင်းကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ရှိများကိုထိခိုက်ရာမြူတေးရှင်းသောအရာကိုရာခိုင်နှုန်းအားထိခိုက်သို့မဟုတ်အကျိုးရှိသောဖြစ်များပါတယ်အဖြစ်မေးခွန်းပွင့်လင်းသည်။ မြူတေးရှင်းအများစုသည်ကြားနေဖြစ်များပါတယ်သို့မဟုတ်ပင်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပေမည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ထိခိုက်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိသောနှစ်ဦးစလုံးအပြောင်းအလဲအရပျကိုယူနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ထိခိုက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့သက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွားမှတဆင့်ဥပမာလျော့ပါးနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
သူတို့ဆင့်ကဲအဘို့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုစွပ်စွဲချက်မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားဘယ်လောက်ပေးထား, သံဖြစ်သော - ဤဆွေးနွေးငြင်းခုံနှင့်တသားတပြဿနာ creationists ဆို evidentiary ထောက်ခံမှုကင်းမဲ့စေတဲ့သီအိုရီအချက်ပေါ်လည်းအကြီးအကျယ်အားကိုးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Creationists (သို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ကြောင်းရှင်သန်မှုမဖြစ်နိုင်ညီမျှဖြစ်သကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်) အချိန်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲများတစ်ခုသက်ရှိများ၏ inviability မှုရမည်ဟု theorize ။ ဤသည်ကိုကူးမရနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကသက်သေအထောက်အထားမဆိုသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာထောက်ပြသို့မဟုတ်မည်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမော်ဒယ်မှတဆင့်ဖော်ပြရန်မဟုတ်နိုင်သည့်အရာတစ်ဦး "မှော်လိုင်း" ဖြစ်ပါတယ်။
ဆင့်ကဲဝါဒီဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်သက်ရှိဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ကိုပင်ကိုယ်မူလယန္တရားများထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေတစ်ခုသက်ရှိကိုသတ်သို့မဟုတ်ယင်း၏မျိုးဗီဇအပေါ်ဖြတ်သန်းကနေတားဆီးလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်မှာလက်ရှိသက်ရှိထိခိုက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူဗီဇသယ်ဆောင်ပြုသော်လည်းထိုအသက်ရှိရှင်သန်။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် (အကြီးစားထိခိုက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေထွက်ပေါင်းပင်လေ့လို) မှာအလုပျလုပျဖို့သက်ရှိများ၏အနှစ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာနှင့်သနျးပေါငျးမြားစှာရှိခဲ့ကြောင်းပေးထား, ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူသက်ရှိ၏ "မဖြစ်နိုင်" ရှင်သန်မှုတော့ဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်မထင်ထားဘူး။
ကျယ်ပြန့်သောအပြောင်းအလဲအချိန်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီနိဂုံးအခြနှင့်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးအနက်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြေစိုက်နေစဉ်ထို့ကြောင့်အီဗိုလူးရှင်းအခြမ်း creationists သရုပ်ပြဘာမျှရှိစဉ်အခါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဘုံနွယ်ဖွားဇီဝနှင့်ယုတ္တိနည်းဖြစ်နိုင်သောနှစ်ဦးစလုံးသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်များနှင့်အဓမ္မသိပ္ပံဘာသာတရားမှ Superior ဖြစ်ပါတယ်မည်သို့
တရားရုံးထဲမှာကျိန်ဆိုခြင်းများကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု vs. အတည်ပြု
Zyklon B ကိုအဆိပ်
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် Softec ပုံစကိတ်စီးခြင်း၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တစ်ဦးအစိမ်းရောင်မြက် Pro ကိုဆိုင်ဆိုတာဘာလဲ
2008 ၏ထိပ်တန်းအကသီချင်းများ - DJ သမားနှင့်အညီ 2008 ခုနှစ်ရဲ့ထိပ်ကခုန်သီချင်းစာရင်းတစ်ခု
ဂရိတ် Rapper အားဖြင့်အဆိုးဆုံး Rap ဂီတအယ်လ်ဘမ်များ
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း One-Day ကိုနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်များ
-ci - ပြင်သစ်နောက်ဆက်
Bob Dylan, Billy Quinn, နှင့် "စက်ရုံမိန်းကလေး" ၏ပုံပြင်
ဒီဇိုင်း PSAT သင်္ချာ
သစ်ကြံပိုး Stick Yule Candleholder
ထိပ်တန်းဂျော့ခ်ျ Carlin ဘာသာတရားအပေါ်ကိုးကား
(ကြိုးစားပါမှ) "Essayer" Conjugate လုပ်နည်း
ပထမကမ္ဘာစစ်: ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရန့်ဗွန် Hipper
အာရှအမေရိကန်က Black Panther ရစ်ချတ် Aoki ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ